people Nepal » सफलताको असली राज सेक्स ! सफलताको असली राज सेक्स ! – people Nepal
Posted on August 26, 2018 by Purna Nanda Joshi
तपाई सोचिरहनु भएको होला यो कसरी हुन्छ ? आउनुहोस आज हामी सेक्ससँग जोडिएका केही राजका बारेमा जानकारी दिन्छौं । जब तपाई सेक्स गर्नुहुन्छ तपाईको मन खुश हुन्छ । र अफिसमा राम्रोसँग काम गर्न सक्नुहुन्छ । जव अफिसमा राम्रो काम गर्नुहुन्छ तब तपाईको बोस खुशी हुन्छन् र प्रमोशन गरिनदिन्छन् । यो हामीले भनेको होइन, एक अध्ययनले यस्तो भन्छ । के तपाईलाई थाहा छ सेक्स सफलताको राज ? जान्नुहोस यसबारेमा सबै कुराः
वास्तवमा दैनिक सेक्स गर्नाले तपाईको स्वास्थ्य राम्रो रहन्छ र तपाईको मन पनि खुशी हुनेछ । साथै तपाई आफ्नो नियमित काम पनि बडो राम्रोसँग गर्न सक्नुहुन्छ । यानी कि राम्रो सेक्सले आत्मविश्वास बढाउँछ र यसको सकरात्मक असर तपाईको दैनिक जीवनका साथै प्रोफेसनल लाइफमा पनि पर्ने अध्ययनले दावी गरेको छ । एजेन्सी